छतबाट खसेर दुई जनाको मृत्यु, प्रहरी भन्छ : जुवाखालमा छापा मार्दा ३ तलाबाट हामफाले :: PahiloPost
छतबाट खसेर दुई जनाको मृत्यु, प्रहरी भन्छ : जुवाखालमा छापा मार्दा ३ तलाबाट हामफाले
6th October 2018, 07:55 am | २० असोज २०७५
काठमाडौं : दशैंको मुखैमा प्रहरीले छापा मार्दा जुवाको खालबाट भाग्‍न खोज्ने दुई जनाको छतबाट खसेर मृत्यु भएको प्रहरीले दावी गरेको छ। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर ७ मा जुवाखाल चलेको सूचना पाएपछि प्रहरी परिचालन भएको थियो।
गए राति जुवाखालमा प्रहरी पुगेको थियो। चेन गेट लगाएर जमिरहेको जुवा खालमा प्रहरी पुगेपछि भागाभाग भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जुवाखालमा प्रहरी पुग्नासाथ सरोज घले र सोम तामाङ भागेका थिए। उनीहरु तीन तले घरको छतबाट हाम फालेर प्रहरीको फन्दाबाट बच्न खोजेको महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी बसन्त लामाले जानकारी दिए। लडेर घाइते भएका दुवैलाई उपचारका लागि बीएन्डबी अस्पताल लगिएको थियो।
प्रहरीले जुवाखालबाट २४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरुसँगबा ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पनि जफत भएको छ। ४/५ समूहमा जुवा चलिरहेको ठाउँमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। प्रहरीले घरधनी तेन्दु शेर्पालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। शेर्पाले केही समयदेखि घर दैनिक १० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिएर जुवा खेलाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
एउटा घरको छतबाट अर्को घरको छतमा हाम फाल्न खोज्दा बीचमा झरेर दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुने सरोज घले काठमाडौं महाँकालका हुन् भने सोम तामाङ सिन्धुपाल्चोक भोटेचौरका।
छतबाट खसेर दुई जनाको मृत्यु, प्रहरी भन्छ : जुवाखालमा छापा मार्दा ३ तलाबाट हामफाले को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
yugesh joshi [ 2018-10-06 10:50:14 ]
भ्रष्टाचारर्को मूल मन्त्र : 'बिगो बमोजिम जरिवाना'
जुवा राम्रो चिज होइन । यसले समाजमा बिकृति फैलाउँछ, घरको शान्ती बीगार्छ । यस्तो कार्यलाई बढावा नदिनु प्रशासनको कर्तव्य हो ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासनबाट स्पष्ट विज्ञप्ति निकाली फकेबूक मार्फत सार्वसाधारणलाई सूचित गरिनु पर्छ ।
- जुवाको पारीभाषा के हो ?
- खेल्नै नहुने वा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन वेला खेल्न हुने ?
- कतिसम्म खेल्न पाउने ?
- अभियुक्तलाई जरिवाना कतिसम्म गर्ने, हद्बन्दी के हो ?
- यो अभियानमा लागेका प्रहरीहरुको पारदर्शिता के हुने ?
नियमहरु बारे स्पष्ट किटान गरी जनचेतना फैलाउनु पर्छ अन्यथा यो प्रहरी प्रशासनको लागि कमाई खाने भाँडो बन्न जानेछ । यस मामिलामा प्रहरी प्रशासन पहिल्यनै निकै बदनाम भैसकेको छ । नबुझेको कसैले होइन तर यो बिषय समाजमा प्रतिष्ठाको बिषय भएकाले ईज्जतकोलाई नै तैं चुप मै चुप हुने भएकोले पनि प्रहरी प्रशासनलाई झोल गर्न सजिलो भएको हो । यस्तो आम्दानीको 'राप' निकै माथिसम्म पुग्ने गरेको एक प्रहरी मित्रले नै बताउँछन् र भन्छन - दशै हाम्रोलागी साच्चिकै दशै नै हो ।